ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူခိုးတစ်ယောက်တောင်မရှိတဲ့ နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် သင်အံ့သြသွားမလား? မယုံရင် အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
“ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူခိုးမရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံပင်။”
ထိုစကား ကို ပြောခဲ့သူမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီပင် ဖြစ်သည်။ အီဂတ်ပူရီပြည်နယ်၌ ဗုဒ္ဓ၏ ဝိပဿနာ တရားတော်များကို ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသော ဂုရုကြီး ဦးဂိုအင်ကာ ၏ အဘိုးတော်သူပင်ဖြစ်သည်။
အရောင်းအဝယ်ကုန်သည် အလုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေဆန့်ခဲ့ဖူးသော ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီသည် သူအမြတ်နိုးဆုံးဖြစ်သော မန္တလေးရတနာပုံ နေပြည့်တော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည်။
ထိုချိန်က အထက် မြန်မာပြည် သည် မြန်မာဘုရင်၏ လက်ထဲမှာသာ ရှိသေးသောကြောင့် သူခိုးလူလိမ် ဆိုသည်မှာ ချိုနှင့်လား ဟု မေးရလောက်အောင် မြန်မာတိုင်း စာရိတ္တ သတ္တိ အပြည့်ရှိနေချိန် ဖြစ်ပါ၏။
ထိုသူသည် ကုန်သည်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ရာ အထက်မြန်မာပြည်ရှိ မြို့ကြီး အသီးသီးသို့ သွားရောက် ရောင်းဝယ်ရသည်။ ပစ္စည်းပစ္စယများ သယ်ရန်အတွက် မြင်းငါးကောင် နှင့် အတူ မြန်မာ မြင်းစီးသမား ငါးယောက် ကိုလည်း တစ်ခါတည်း အသွားအပြန် ငှားလာခဲ့ရသည်။
အရောင်းအဝယ် ပစ္စည်းများသောကြောင့် ရက်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ ၏ ပိုက်ဆံထည့်သည့် အိတ်ကြီးမှာလည်း ငွေဒင်္ဂါးများနှင့် ပြည့်ပြည့် လာခဲ့သည်။
နောက်ထပ် မြို့သုံးမြို့ ငါးရက် ခရီးနှင်ပြီးလျှင် သည်တစ်ခေါက် အရောင်းအဝယ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီသည် အိမ်ပြန်ရတော့မည်ကို တွေးပြီး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေလေသည်။
နေဝင်စပြုနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် လှမ်းမြင်နေရသော ဇရပ်တစ်ခုပေါ်တွင် တစ်ည အိပ်ရန် မြင်းသမားများ ကို အချက်ပြလိုက်သည်။
ရှေးခေတ်က ဇရပ်ဆိုသည်မှာ ညအိပ်ညနေ ခရီးသည်များအတွက် လမ်းဆုံ လမ်းခွတွင် ဆောက်ထားသော ဇရပ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်။ အမိုးနှင့်အခင်းကို အကောင်းဆုံး လုပ်ထားသော်လည်း အကာ မရှိသောကြောင့် အရပ် လေးမျက်နှာမှ ခရီးသွားများ တံခါးမရှိ။
ဓားမရှိ လွတ်လပ်ချမ်းသာစွာ တည်းခိုနိုင်သည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်ဟု ယူဆရသည်။တတ်နိုင်သော ဇရပ်အလှူရှင် အချို့သည် ခရီးသွားများအတွက် ဆန် ဆီ စသော စားသောက်ဖွယ်ရာ များကိုပင် ထားပေးကြောင်း သိရသည်။
ချက်ပြုတ်စားသောက်ပြီး နေလည်း မရှိတော့ပြီဖြစ်၍ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီတို့ ထိုဇရပ်မှာပင် ညအိပ်လိုက်ကြသည်။ နောင်တစ်နေ့ မိုးမလင်မီ မနက်စောစော ခရီးဆက်ကြရန် မြင်းသမားတို့ကို ဆော်သြ ထားလိုက်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ငွေဒင်္ဂါးအိတ်ကြီးကို မေ့ကျန်နေခဲ့မှာ စိုးသောကြောင့် ခေါင်းအုံး အိပ်လိုက်သည်။
မနက် လေးနာရီ လောက်ထပြီး မြန်မြန်ထက်ထက် ပြင်ဆင်ကာ ရှေ့ခရီးကို ဆက်လာခဲ့ကြသည်။ ခြောက်နာရီခန့် ခရီးပေါက်ပြီးသောအခါမှ ခေါင်းအုံး အိပ်ခဲ့သည့် ငွေအိတ်ကြီး ပါမလာမှန်း ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ သိသွားသည်။
ပြင်းထန်သော စိုးရိမ်သောက စိတ်ကြောင့် နှလုံးသားမှာ တဒိန်းဒိန်းခုန်လာပြီး အမောဆို့သလိုပင် ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် – “ဟေ့ . . အားလုံးရပ်လိုက်ကြဦး။”
“ကျွန်တော့ ငွေဒင်္ဂါးအိတ်ကြီး ညအိပ်ခဲ့တဲ့ ဇရပ်ပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်လှည့်ပြန် ကြရမယ်”ဟု ပြောလိုက်သော်လည်း မြန်မာလူမျိုး မြင်းသမား ငါးယောက်လုံး တစ်ယောက်မှ တအံ့တသြ တထိတ်တလန့် ဖြစ်မသွားကြ။
သွားယူပေးမည့် အမူအရာလည်း မပြကြသဖြင့် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ မနေနိုင်တော့ –“ကဲ. . . မြန်မြန်သွားယူဘို့ ပြင်ကြလေ။
ဘာလို့ အေးတိ အေးစက် ဖြစ်နေကြ တာတုန်း”ဟု ပြောလိုက်သော အခါတွင်မှအသက်ခပ်ကြီးကြီး မြင်းသမားတစ်ဦးက –
“မိတ်ဆွေကြီး ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။ ကိုယ့်ခရီးကိုသာ ပြီးဆုံးအောင် ဆက်သွားပါ။ အပြန်ကျမှ ငွေအိတ်ကိုဝင်ယူပါ။ မိတ်ဆွေကြီးငွေအိတ် ဘယ်မှ ထွက်မပြေး ပါဘူး။ဘယ်သူမှလည်း မယူပါဘူး။”ဟု ပြောလိုက်သဖြင့် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ တစ်ယောက် ဒေါသထွက်သွားသည်။
“လွယ်ရင် သူကြွယ်တောင်မနေဘူး” ဟူသော စကားရှိနေရာ အဆင်သင့် တွေ့ရသော ငွေဒင်္ဂါးအိတ်ကြီးကို ဘယ်လို လူသည် မယူဘဲ နေနိုင်ပါအံ့နည်း။
ဘယ်သူမှ မယူဘူး ဟု တာဝန်ခံနိုင် လောက်အောင် သူတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဘယ်လောက်များစာရိတ္တ ကောင်းနေကြလို့ နည်းဟု တွေးနေမိသည်။
“အေးလေ . .. ငါတို့ ထွက်လာကြတာလဲ ခြောက်နာရီ ကျော်သွားပြီးဆိုတော့ ဒီငွေအိတ်ကြီးကို ခရီးသွား တစ်ယောက်ယောက်ကရပြီး ယူသွားရောပေါ့။ငါသွားနေလည်း ပင်ပန်းတာ အဖတ်တင်မှာပ”ဲဟု စိတ်ပျက်စွာနှင့် ဆက်ကာ တွေးပြီး ရှေ့မှာရှိသည့် မြို့ဈေးများသို့သာ ဆက်သွားလိုက် ကြသည်။
ငါးရက်ခန့်ရှိမှ ပြန်လာကြသောအခါ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ ထားခဲ့သော ငွေဒင်္ဂါးကြီမှာ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်ခဲ့စဉ်က အတိုင်းပင် လက်ရာမပျက် ပြန်တွေ့ရသည်။ ရေတွက်ကြည့်သော အခါတွင်လည်း တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ မလျော့။
ထို့ကြောင့်လည်း ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီက ကမ္ဘာ့ဝိပဿနာတရားပြဆရာကြီး ဖြစ်လာမည့် ဦးဂိုအင်ကာ အလောင်းအလျာ သူ့မြေးလေး ကို“ငါ့မြေးရေ၊ အဘိုးတို့ ဒီမြန်မာပြည်မှာ နေခွင့်ရတာ သိပ်ကံကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သူခိုးမရှိတဲ့ နိုင်ငံဆိုလို့ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။”
နောက်တစ်ခုက မန္တလေး ရတနာပုံ ဈေးချိုတော်ကြီး လမ်းအလယ်မှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အဖိုးတန် စိန်နားကပ်တစ်ဖက် ပြုတ်ကျ ကျန်နေ ခဲ့တယ်။ ဈေးလယ်ဆိုတော့ ဈေးရောင်းသည်၊ ဈေးဝယ်သည် တစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်တော့ တွေ့မှာပဲ။ သို့သော် တစ်ယောက်မှ ယကောက်မယူကြဘူး။
အလွယ်တကူ တွေ့ရတဲ့ အဖိုးတန် ပစ္စည်းကိုတောင် ကောက်မယူတဲ့ မြန်မာ လူမျိုးတွေဟာ သူတစ်ပါးအိမ်ကပစ္စည်း မသိအောင်ယူဖို့ ဆိုတာကတော့ ပိုပြီး ဝေးသေးတာပေါ့။
ဒါနဲ့ ဈေးချိုသာ ပိတ်သွားတယ် စိန်နားကပ်ကြီးကတော့လမ်းပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းပါပဲ။နောက်တစ်နေ့မနက် ဈေးချိုဖွင့်ခါနီးမှာ အလုပ်သမလေး တစ်ယောက် စိန်နား ကပ်ကြီးကို တွေ့သွားတယ်။
“ဥစ္စာဆင်းရဲသော်လည်း စာရိတ္တ မဆင်းရဲတဲ့ သူတွေကို မြင်ဖူးချင်ရင်” မြန်မာပြည်ကို လာခဲ့ပါလို့ ပြောရတော့မှာပဲ။
အလုပ် သမလေးဟာ စိန်နားကပ်ကို ကောက်ယူ လိုက်တယ်။ ယူဖို့မဟုတ်ဘူး။ စိန်နားကပ်အောက်က ဖုန်တွေ အမှိုက်သရိုက်တွေ လှဲပစ်ဖို့အတွက်ပါ။
လှဲကျင်းပြီး တဲ့အခါ တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲ အတိအကျ ပြန်ထားလိုက်တယ်။ ပိုင်ရှင်က သူကျ ပျောက်တဲ့နေရာ ပြန်လာရှာရင် မြန်မြန်တွေ့ပါစေဆိုတဲ့ စေတနာပေါ့။
နောက်ဆုံး ဈေးရုံးတာဝန်ခံ ကိုယ်တိုင်မြို့ထဲ “မောင်းထု ပိုင်ရှင်ရှာပြီး ပေးလိုက်ရတယ်” ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။
ကဲ စဉ်းစားကြည့်ကြ ပေတော့။ အရင်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ယခုမြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်လောက် ကွာခြားသွားပြီလဲ။ ဒါကို ကြည့်ပြီး စိတ်မပျက်ကြပါနဲ့။
“ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ” ဆိုသလို မိမိကိုယ် ကိုသာ ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင် (စာရိတ္တပိုင်းသာ) တာဝန်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံမှ မဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘယ်လောက် ငြိမ်းချမ်းမလဲ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ သူခိုးတဈယောကျတောငျမရှိတဲ့ နိုငျငံဟာ မွနျမာနိုငျငံဖွဈခဲ့ဖူးတယျဆိုရငျ သငျအံ့သွသှားမလား? မယုံရငျ အောကျမှာ ဖတျကွညျ့ပါ။
“ကမ်ဘာပျေါတှငျ သူခိုးမရှိသော နိုငျငံ တဈနိုငျငံ ရှိခဲ့ဖူးသညျ။ ထိုသညျမှာ မွနျမာနိုငျငံပငျ။”
ထိုစကား ကို ပွောခဲ့သူမှာ အိန်ဒိယနိုငျငံသား ဟိန်ဒူဘာသာဝငျ ဘဆဆျေလာလျဂြီပငျ ဖွဈသညျ။ အီဂတျပူရီပွညျနယျ၌ ဗုဒ်ဓ၏ ဝိပဿနာ တရားတျောမြားကို ကမ်ဘာသို့ ဖွနျ့ဝလေကျြရှိသော ဂုရုကွီး ဦးဂိုအငျကာ ၏ အဘိုးတျောသူပငျဖွဈသညျ။
အရောငျးအဝယျကုနျသညျ အလုပျဖွငျ့ ကမ်ဘာအနှံ့ ခွဆေနျ့ခဲ့ဖူးသော ဘဆဆျေလာလျဂြီသညျ သူအမွတျနိုးဆုံးဖွဈသော မန်တလေးရတနာပုံ နပွေညျ့တျောတှငျ အခွခြေ နထေိုငျခဲ့သညျ။
ထိုခြိနျက အထကျ မွနျမာပွညျ သညျ မွနျမာဘုရငျ၏ လကျထဲမှာသာ ရှိသေးသောကွောငျ့ သူခိုးလူလိမျ ဆိုသညျမှာ ခြိုနှငျ့လား ဟု မေးရလောကျအောငျ မွနျမာတိုငျး စာရိတ်တ သတ်တိ အပွညျ့ရှိနခြေိနျ ဖွဈပါ၏။
ထိုသူသညျ ကုနျသညျကွီး တဈဦးဖွဈရာ အထကျမွနျမာပွညျရှိ မွို့ကွီး အသီးသီးသို့ သှားရောကျ ရောငျးဝယျရသညျ။ ပစ်စညျးပစ်စယမြား သယျရနျအတှကျ မွငျးငါးကောငျ နှငျ့ အတူ မွနျမာ မွငျးစီးသမား ငါးယောကျ ကိုလညျး တဈခါတညျး အသှားအပွနျ ငှားလာခဲ့ရသညျ။
အရောငျးအဝယျ ပစ်စညျးမြားသောကွောငျ့ ရကျကွာလာသညျနှငျ့အမြှ ဘဆဆျေလာလျဂြီ ၏ ပိုကျဆံထညျ့သညျ့ အိတျကွီးမှာလညျး ငှဒေင်ျဂါးမြားနှငျ့ ပွညျ့ပွညျ့ လာခဲ့သညျ။
နောကျထပျ မွို့သုံးမွို့ ငါးရကျ ခရီးနှငျပွီးလြှငျ သညျတဈခေါကျ အရောငျးအဝယျပွီးဆုံးပွီဖွဈ၍ ဘဆဆျေလာလျဂြီသညျ အိမျပွနျရတော့မညျကို တှေးပွီး ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ဖွဈနလေသေညျ။
နဝေငျစပွုနပွေီ ဖွဈသညျ့အတှကျ လှမျးမွငျနရေသော ဇရပျတဈခုပျေါတှငျ တဈည အိပျရနျ မွငျးသမားမြား ကို အခကျြပွလိုကျသညျ။
ရှေးခတျေက ဇရပျဆိုသညျမှာ ညအိပျညနေ ခရီးသညျမြားအတှကျ လမျးဆုံ လမျးခှတှငျ ဆောကျထားသော ဇရပျမြိုးသာ ဖွဈသညျ။ အမိုးနှငျ့အခငျးကို အကောငျးဆုံး လုပျထားသျောလညျး အကာ မရှိသောကွောငျ့ အရပျ လေးမကျြနှာမှ ခရီးသှားမြား တံခါးမရှိ။
ဓားမရှိ လှတျလပျခမျြးသာစှာ တညျးခိုနိုငျသညျ ဟူသော အဓိပ်ပါယျကို ဆောငျသညျဟု ယူဆရသညျ။တတျနိုငျသော ဇရပျအလှူရှငျ အခြို့သညျ ခရီးသှားမြားအတှကျ ဆနျ ဆီ စသော စားသောကျဖှယျရာ မြားကိုပငျ ထားပေးကွောငျး သိရသညျ။
ခကျြပွုတျစားသောကျပွီး နလေညျး မရှိတော့ပွီဖွဈ၍ ဘဆဆျေလာလျဂြီတို့ ထိုဇရပျမှာပငျ ညအိပျလိုကျကွသညျ။ နောငျတဈနေ့ မိုးမလငျမီ မနကျစောစော ခရီးဆကျကွရနျ မွငျးသမားတို့ကို ဆျောသွ ထားလိုကျသညျ။
အရေးအကွီးဆုံးဖွဈသညျ့ ငှဒေင်ျဂါးအိတျကွီးကို မကေ့နျြနခေဲ့မှာ စိုးသောကွောငျ့ ခေါငျးအုံး အိပျလိုကျသညျ။
မနကျ လေးနာရီ လောကျထပွီး မွနျမွနျထကျထကျ ပွငျဆငျကာ ရှခေ့ရီးကို ဆကျလာခဲ့ကွသညျ။ ခွောကျနာရီခနျ့ ခရီးပေါကျပွီးသောအခါမှ ခေါငျးအုံး အိပျခဲ့သညျ့ ငှအေိတျကွီး ပါမလာမှနျး ဘဆဆျေလာလျဂြီ သိသှားသညျ။
ပွငျးထနျသော စိုးရိမျသောက စိတျကွောငျ့ နှလုံးသားမှာ တဒိနျးဒိနျးခုနျလာပွီး အမောဆို့သလိုပငျ ဖွဈလာသညျ။ ထို့ကွောငျ့ – “ဟေ့ . . အားလုံးရပျလိုကျကွဦး။”
“ကြှနျတော့ ငှဒေင်ျဂါးအိတျကွီး ညအိပျခဲ့တဲ့ ဇရပျပျေါမှာ ကနျြနခေဲ့တယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နောကျလှညျ့ပွနျ ကွရမယျ”ဟု ပွောလိုကျသျောလညျး မွနျမာလူမြိုး မွငျးသမား ငါးယောကျလုံး တဈယောကျမှ တအံ့တသွ တထိတျတလနျ့ ဖွဈမသှားကွ။
သှားယူပေးမညျ့ အမူအရာလညျး မပွကွသဖွငျ့ ဘဆဆျေလာလျဂြီ မနနေိုငျတော့ –“ကဲ. . . မွနျမွနျသှားယူဘို့ ပွငျကွလေ။
ဘာလို့ အေးတိ အေးစကျ ဖွဈနကွေ တာတုနျး”ဟု ပွောလိုကျသော အခါတှငျမှအသကျခပျကွီးကွီး မွငျးသမားတဈဦးက –
“မိတျဆှကွေီး ဘာမှစိတျမပူပါနဲ့။ ကိုယျ့ခရီးကိုသာ ပွီးဆုံးအောငျ ဆကျသှားပါ။ အပွနျကမြှ ငှအေိတျကိုဝငျယူပါ။ မိတျဆှကွေီးငှအေိတျ ဘယျမှ ထှကျမပွေး ပါဘူး။ဘယျသူမှလညျး မယူပါဘူး။”ဟု ပွောလိုကျသဖွငျ့ ဘဆဆျေလာလျဂြီ တဈယောကျ ဒေါသထှကျသှားသညျ။
“လှယျရငျ သူကွှယျတောငျမနဘေူး” ဟူသော စကားရှိနရော အဆငျသငျ့ တှရေ့သော ငှဒေင်ျဂါးအိတျကွီးကို ဘယျလို လူသညျ မယူဘဲ နနေိုငျပါအံ့နညျး။
ဘယျသူမှ မယူဘူး ဟု တာဝနျခံနိုငျ လောကျအောငျ သူတို့ မွနျမာလူမြိုးတှကေ ဘယျလောကျမြားစာရိတ်တ ကောငျးနကွေလို့ နညျးဟု တှေးနမေိသညျ။
“အေးလေ . .. ငါတို့ ထှကျလာကွတာလဲ ခွောကျနာရီ ကြျောသှားပွီးဆိုတော့ ဒီငှအေိတျကွီးကို ခရီးသှား တဈယောကျယောကျကရပွီး ယူသှားရောပေါ့။ငါသှားနလေညျး ပငျပနျးတာ အဖတျတငျမှာပ”ဲဟု စိတျပကျြစှာနှငျ့ ဆကျကာ တှေးပွီး ရှမှေ့ာရှိသညျ့ မွို့စြေးမြားသို့သာ ဆကျသှားလိုကျ ကွသညျ။
ငါးရကျခနျ့ရှိမှ ပွနျလာကွသောအခါ ဘဆဆျေလာလျဂြီ ထားခဲ့သော ငှဒေင်ျဂါးကွီမှာ ခေါငျးအုံးပွီး အိပျခဲ့စဉျက အတိုငျးပငျ လကျရာမပကျြ ပွနျတှရေ့သညျ။ ရတှေကျကွညျ့သော အခါတှငျလညျး တဈပွားတဈခပျြမြှ မလြော့။
ထို့ကွောငျ့လညျး ဘဆဆျေလာလျဂြီက ကမ်ဘာ့ဝိပဿနာတရားပွဆရာကွီး ဖွဈလာမညျ့ ဦးဂိုအငျကာ အလောငျးအလြာ သူ့မွေးလေး ကို“ငါ့မွေးရေ၊ အဘိုးတို့ ဒီမွနျမာပွညျမှာ နခှေငျ့ရတာ သိပျကံကောငျးတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ သူခိုးမရှိတဲ့ နိုငျငံဆိုလို့ မွနျမာနိုငျငံ တဈခုပဲ ရှိတယျ။”
နောကျတဈခုက မန်တလေး ရတနာပုံ စြေးခြိုတျောကွီး လမျးအလယျမှာ အမြိုးသမီး တဈယောကျ အဖိုးတနျ စိနျနားကပျတဈဖကျ ပွုတျကြ ကနျြနေ ခဲ့တယျ။ စြေးလယျဆိုတော့ စြေးရောငျးသညျ၊ စြေးဝယျသညျ တဈယောကျမှ တဈယောကျတော့ တှမှေ့ာပဲ။ သို့သျော တဈယောကျမှ ယကောကျမယူကွဘူး။
အလှယျတကူ တှရေ့တဲ့ အဖိုးတနျ ပစ်စညျးကိုတောငျ ကောကျမယူတဲ့ မွနျမာ လူမြိုးတှဟော သူတဈပါးအိမျကပစ်စညျး မသိအောငျယူဖို့ ဆိုတာကတော့ ပိုပွီး ဝေးသေးတာပေါ့။
ဒါနဲ့ စြေးခြိုသာ ပိတျသှားတယျ စိနျနားကပျကွီးကတော့လမျးပျေါမှာ ဒီအတိုငျးပါပဲ။နောကျတဈနမေ့နကျ စြေးခြိုဖှငျ့ခါနီးမှာ အလုပျသမလေး တဈယောကျ စိနျနား ကပျကွီးကို တှသှေ့ားတယျ။
“ဥစ်စာဆငျးရဲသျောလညျး စာရိတ်တ မဆငျးရဲတဲ့ သူတှကေို မွငျဖူးခငျြရငျ” မွနျမာပွညျကို လာခဲ့ပါလို့ ပွောရတော့မှာပဲ။
အလုပျ သမလေးဟာ စိနျနားကပျကို ကောကျယူ လိုကျတယျ။ ယူဖို့မဟုတျဘူး။ စိနျနားကပျအောကျက ဖုနျတှေ အမှိုကျသရိုကျတှေ လှဲပဈဖို့အတှကျပါ။
လှဲကငျြးပွီး တဲ့အခါ တှတေဲ့နရောမှာပဲ အတိအကြ ပွနျထားလိုကျတယျ။ ပိုငျရှငျက သူကြ ပြောကျတဲ့နရော ပွနျလာရှာရငျ မွနျမွနျတှပေ့ါစဆေိုတဲ့ စတေနာပေါ့။
နောကျဆုံး စြေးရုံးတာဝနျခံ ကိုယျတိုငျမွို့ထဲ “မောငျးထု ပိုငျရှငျရှာပွီး ပေးလိုကျရတယျ” ဟု ပွောခဲ့ဖူးသညျ။
ကဲ စဉျးစားကွညျ့ကွ ပတေော့။ အရငျတုနျးက မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ယခုမွနျမာနိုငျငံ ဘယျလောကျ ကှာခွားသှားပွီလဲ။ ဒါကို ကွညျ့ပွီး စိတျမပကျြကွပါနဲ့။
“ပကျြအစဉျ ပွငျခဏ” ဆိုသလို မိမိကိုယျ ကိုသာ ငါးပါးသီလ လုံခွုံအောငျ (စာရိတ်တပိုငျးသာ) တာဝနျယူပါက မွနျမာနိုငျငံမှ မဟုတျ တဈကမ်ဘာလုံး ဘယျလောကျ ငွိမျးခမျြးမလဲ။